Sylvi Listhaug oo lagu tilmaamey mid kamid ah Donal Trump-yada Yurub - NorSom News
Sylvi Listhaug oo lagu tilmaamey mid kamid ah Donal Trump-yada Yurub
Wargeyska caanka ee Washington Post ayaa wasiirada arimaha soo galootiga ee dowlada Norway, ku darey liiska siyaasiyiinta qaarada yurub oo ay ugu magac dareen Donald Trump-yada qaarada Yurub.
Liiskan waxaa Sylvi Listhaug kula jiro Geert Wilders(Party for Freedom, Holand), Marina La pen( Front National, Faransiiska), Norbert Hofer(Freiheitliche Partei Österreichs, Austria).
Sadexdan siyaasi ee liiska kula jiro Listhaug ayaa, waxay ku caanbaxeen ajnabi iyo islaam naceyb. Gaar ahaan Marina La pen iyo Geert Wilders. Nobert Hofer, waxaa asna loogu naaneysaa Hitlerka cusub ee Austria.
WP ayaa sheegay in guud ahaan qaarada yurub ay kusoo xoogeysanayaan xisbiyada midigta fog ee mayalka adag, sababo la xiriira soo galootiga tirada badan, Globaliseringenka(Isku furanka dowladaha aduunka) iyo shaqo la´aanta sii kordheysa ee kajirto wadamada qaarada yurub.
Wargeyskan ayaa Sylvi Listhaug ku tilaamey iney tahay xidig si dhaqso ah usoo caan-baxdey, wuxuuna u saadaaliyey iney iyadu mustaqbalka hogaamin doonto xisbigeeda FRP.
Sylvie Listhaug oo ka jawaabeyso liiska Washington Post ayaa sheegtay, in WP waxbo kala socon siyaasada Norway guud ahaa, iyo tan xisbigeeda FRP.
Previous articleAllason: 2019 iskuma soo sharixi doono doorashada golaha deegaanka Kristiansand
Next article(Daawo): Jaaliyada Soomaalida oo kulan wada tashi ku yeeshay Magaalada Bergen.